Ungawana sei basa kuGerman? Nongedzo inokurumidza yevatorwa uye veGerman vagari - ALinks
Kuti uwane basa kuGerman, munhu wese anoda kutanga atsvaga basa kuGerman. Unogona kutsvaga basa kubva chero kupi, ungave uchigara kuGerman kana kunze kwenyika. Zvichienderana nenyika yako, unogona zvakare kuuya kuGerman uye wozowana basa.
Paunenge uchinge uine basa rekupa, iwe unoda kunzwisisa kana iwe uchida vhiza yekushanda kuGerman. Naizvozvo chinhu chekutanga chaunofanirwa kuita kuti uwane basa kuGerman kutsvaga basa, uyezve unonetseka nezve zvimwe zvese. Verenga zvimwe pazasi nezvekuti ungawana sei basa kuGerman.
Ungawana sei basa kuGerman?
Kuti uwane basa kuGerman, iwe unongoda kutanga wawana basa kuGerman. Kwese kwaunenge uri, kuGerman kana kunze kwenyika, unogona kutsvaga basa kuGerman. Verenga zvimwe pazasi nezvekuti ungawana sei basa kuGerman.
Mamwe marudzi anogona zvakare kuuya kuGerman kutanga obva atsvaga basa.
Unogona kuuya kuGerman usati wawana basa kana iwe uine pasipoti kubva kuEuropean Union (EU) nyika. Naizvozvo chero pasipoti kubva kuAustria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Republic of Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Poland, Portugal, Portugal , Romania, Slovakia, Slovenia, Spain neSweden.
Unogona kuuya kuGerman usati wawana kuve nebasa zvakare kana uine pasipoti kubva kuLiechtenstein, Iceland, Norway kana Switzerland.
Unogona kuuya kuGerman usati wawana kuve nebasa pasina vhiza asi kwemwedzi mitatu chete kana uine pasipoti kubva kuAustralia, Canada, Israel, Japan, South Korea, New Zealand, UK kana USA.
Vagari veimwe nyika dzese vanoda vhiza yebasa kuti vauye kuGerman kuzoshanda. Asi iwe unofanirwa kunetseka nezvazvo chete mushure mekunge iwe uine basa kupihwa kuGerman. Bhuka musangano musangano wepedyo weGerman mumiriri uye taurirana newaunoshandira mune ramangwana nezvekuti zvingatora nguva yakareba sei.
Kana iwe uine degree rekuyunivhesiti, iro rinozivikanwa kuGerman, iwe unogona kuwana 6 mwedzi vhiza kuti uuye kuGerman kuzotsvaga basa.
Ehezve, kana iwe uchida kudzokera kuchikoro, unogona kufunga nezve kudzidza kuGerman uye pamwe shanda chikamu-chenguva mukati mekudzidza kwako.
MuGerman, vhiza rako rebasa, nemvumo yako yekugara, zvinowanzove zvako, kwete zvemunhu waunoshandira, saka kana iwe uchida kuchinja basa rako kana kuti ukarega kushanda, haufanire kubva munyika.
Unogona kuwana basa kuGerman nekutsvaga mikana yemabasa kuGerman. Iwe uchawana basa kungave zvakananga nekambani kana kuburikidza nesangano remabasa. Heino runyorwa rwe dzinogona nzira dzaunowana basa kuGerman.
Nzvimbo dzeJob kuGerman
Kutanga kwakanaka kutsvaga basa pane anozivikanwa masayiti emabasa.
Baidu, Google, Naver, Sogou or Yandex, kana chero imwe injini yekutsvaga yaunovimba nayo: paunotanga kutsvaga basa, nyore webhu kutsvaga kunogona kutanga kwakanaka. Tarisa rudzi rwebasa raungade kuita, semuenzaniso, "Anoshanda zvekuvaka kuGerman" kana "Musiki wezvinyorwa muBerlin". Shandisa mutauro waunonzwa wakasununguka kutaura. Usamire pamapeji ekutanga uye enda wakadzika nekutsvaga kwako. Iwe unozonzwa nekukurumidza kunzwa kwezvakakomberedza uye nezvekuti ndeapi mawebhusaiti ebasa akakodzera kwazvo pane zvaunoda.
Facebook Mabasa: inogona zvakare kuve sarudzo yekutanga kuona zviri padhuze newe. Iwe unogona zvakare kubvunza uchitenderedza mu Mapoka e Facebook izvo zvinoenderana nebasa rako, kana mutauro wako kana nyika, kana zvinongokodzera zvaunofarira.
zviite kuGerman ine zvinyorwa zvemabasa zviripo kuGerman. Iyo yepamutemo german webhusaiti webhusaiti uye inozivikanwa chaizvo kuGerman. Unogona kuverenga muchiGerman, Chirungu, Spanish, uye French. Asi ruzhinji rwemabasa akanyorwa richava muchiGerman kana Chirungu, saka shandisa Google Dudziro (kana chero mumwe muturikiri waunoda).
chivero ndeimwe nzvimbo inozivikanwa yebasa kubva kuGerman Federal Employment Agency. Unogona kuiverenga muchiGerman, Chirungu, Spanish, French, Turkish, uye Russian. Asi ruzhinji rwemabasa akanyorwa richava muchiGerman kana Chirungu, saka shandisa Google Dudziro (kana chero mumwe muturikiri waunoda).
Chokwadi Germany, Chokwadi ndewe webhusaiti webasa repasi rese asi zvakare ndeimwe yemasaiti anoshanyirwa emabasa kuGerman.
Nhanho Dombo ndiyo imwe yenzvimbo dzinonyanya kufarirwa emabasa kuGerman, ivo vanodaro ivo ndiko kuchinjana kwemabasa kune nyanzvi uye mamaneja. Izvo chete zviri muchiGerman saka uchafanirwa kuzviita neGoogle Dudziro (kana chero mumwe muturikiri waunoda).
Kimeta ndeimwe nzvimbo inozivikanwa yemabasa kuGerman, ivo vanodaro ivo ndiko kuchinjana kwemabasa kune nyanzvi uye mamaneja. Izvo chete zviri muchiGerman saka uchafanirwa kuzviita neGoogle Dudziro (kana chero mumwe muturikiri waunoda).
kununu wongororo vashandirwi, saka iwe unogona pamwe unzwisise zvirinani vanoda kushandira. Ivo 'vasingazivikanwe chiyero chekambani tsika, muhoro, mabhenefiti uye zvimwe iwe unogona kuwana wakanyanya mushandirwi kwauri pane chikuru cheEuropean chiyero chevashandirwi chikuva'.
Masangano ekuunganidza vanhu kuGerman
Mapazi ekushandira anowanzo shanda mune mamwe matunhu. Izvo zvinogona kuve hanya, komputa, mainjiniya, ukoti, accounting, cering, kuvaka, kana zvimwe zvikamu. Dzimwe nguva unogona kutobatika nesangano rinotarisa nyanzvi dzinotambudzwa nemakambani kuti dziwane vega.
Naizvozvo iwe unogona kutsvaga kumusoro agency inogona kukubatsira iwe kuti uwane basa rinoenderana neako hunyanzvi.
Kana iwe, semuenzaniso, nyora 'yekushandira agency padhuze neMunich' paGoogle Mepu, kana chero imwe mepu sevhisi, unogona kuwana runyorwa rwema ejensi akanaka aunogona kubata. Iwe unogona kuita zvakafanana kunzvimbo yako kuti utarise kana uine agency yemuno inogona kukubatsira iwe kuwana basa kuGerman.
Ziva kuti iwe haufanire kubhadhara ejendi kana vakutsvakira basa, saka chenjera kana agency ichikubvunza iwe mari uye woongorora kana iro agency riri pamutemo.
Bvunza zvakakukomberedza iwe kuti uwane mabasa kuGerman
Fomu kubatana, bvunza kwakatenderedza, uye uwane mikana yakatenderedza vako vaunosangana navo. Taura neshamwari dzeshamwari dzevanhu vanogona kufamba kana kushanda kuGerman kana kune dzimwe nyika dzeEU. Kunyangwe iwe uri Qatari kana iwe uchiuya uchibva kunze kwenyika, iwe uchashamisika kuti sei dzimwe shamwari dzako kana mhuri vangangoziva munhu anoziva mumwe munhu.
Ndaishandisa richikand.de kune rumwe ruzivo rwuri pamusoro. richikand.de inzvimbo yeruzivo inotsigirwa neIkunze Hofisi yeHurumende yeGerman. unogona kuverenga muchiGerman, Chirungu, ChiFrench, ChiSpanish, ChiPutukezi, ChiPolish, ChiTurkey, ChiRussian, ChiChinese, uye chiArabic.
Ndaishandisa Zvakafanana uye Neil Patel's Ubersuggest kutarisa kuti akakurumbira sei mamwe emasaiti ebasa anoratidzwa pamusoro.
Chidimbu chemufananidzo wekuvhara pamusoro apa Hakaoma Basa mukati Robert-Bosch-Schule, Stuttgart, Jerimani. Mufananidzo ne Maxime Agnelli on Unsplash
Vaka yako Chiroto Basa MuAustralia
Nzira yekuwana Jobe yakanakisa muUSA?
Maitiro Ekuwana Basa muNigeria
Maitiro Ekuwana Basa muFrance
Mabasa aKak, Basa uye Basa muPakistan.